9 December – Maalinta caalamiga ee ka dhanka ah Musuqmaasuqa | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / 9 December – Maalinta caalamiga ee ka dhanka ah Musuqmaasuqa
9 December – Maalinta caalamiga ee ka dhanka ah Musuqmaasuqa
Himilo FM – Sanad kasta adduun dhan hal tirilyan oo doolarka Maraykanka ah ayaa lagu bixiyaa laaluush, halka cadad lagu qiyaasay 2.6 tirilyan oo doolar xatooyo ahaan loogu dhaco musuqmaasuq.
Si kale marka loo dhigo, adduunka ku baxa musuqmaasuqa sannad kasta wuxuu la’eg yahay 5% dakhliga adduun-weynaha.
Himilo FM – Dalalka soo koraya, marka loo eego Mashruuca horumarinta QM, lacagta ku baxda Musuqmaasuqa waxaa lagu qiyaasaa tobanlaabka lacagta kaalmada horumarineed loo adeegsado.
Musuqu waa gaboodfal weyn kaas oo araxda jebiya horumarka iyo dhaqaalaha bulshooyinka. Majiro dal, bulsho ama gobal ka caagan halistiisa.
Dadku aalaaba waxay moodayaan in musuqu uu yahay hab nololeed kamid ah nolosha maalinlaha ah, hayeeshe, bulsho kasta, urur kasta iyo qof walbaba wuu ka faa’iidayaa kahor-taga ka-dhanka-ah musuqmaasuqa.
Si kastaba, bishii Oct sanadkii 2003 markii la ansixiyay Cahdiga Ka dhanka ah Musuqmaasuqa ee QM, sanad kasta 9 bisha December waxaa dunida laga xusaa Maalinta Caalamiga ee Kahortagga Musuqmaasuqa.
Ku dhawaad mid kamid ah shantii qof ee Afrika ku nool waxay bixiyaan laaluush si ay ku helaan adeeg waxbarasho ama daryeel caafimaad. Waxayna kula macaamilaan saraakiil dowladeed iyo shaqsiyaad ka hoos shaqeysta.
Badi dowladaha dunida saddexaad waxay u muuqdaan inaysan dadaalkii loo baahnaa ku bixinin la dagaalanka Musuqa. Hayeeshee, waa muwaadiniinta qaaradda Afrika kuwa ugu ayaanka daran qaaradaha kale.
Toddobo kamid ah 10-kii qof ee ku nool dalalka qaaradda Afrika siiba kuwa Saxaraha ka hooseeya waxay sheegeen inay bixiyeen laaluush si ay danahooda aas’aasiga ah ugu gaaraan, marka loo eego Hay’adda Caalamiga ee Daah-furnaanta ee ‘Transparency International’.
Hayeeshe, qaaraddu dhammaan ma wada ahan Musuq. Dalal kale sida Mauritius iyo Botswana ayay warbixintu sheegtay in 1% muwaadiniintooda ay adeegga guud ku gaareen bixinta laaluush. Taas oo ka dhigan inay aad ula simman yihiin heerka dunida horumartay ay ka gaartay yareynta iyo cirib-tirka Musuqa.
Previous: Sawirro: Kabaha 17-ka milyan ku fadhiya ee ugu qaalisan caalamka
Next: RW Faransiiska “ Canshuur khatar ma gelin karto midnimada qarankeenna”